Tifitra vy, vy nitifitra, vy voatifitra - TAA
Manome abrasives avo lenta
Fanasongadinana vokatra Manamafy orina, avo fikirizana, androm-piainana maharitra. Vaky ambany, vovoka ambany, loto maloto. Akanjo ambany amin'ny fitaovana, fiainana maharitra amin'ny fitaovana ilaina. Ahenao ny enta-mavesatra dedusting, manalava ny fotoana fampiasana ny fitaovana enti-mihena. Famaritana ara-teknika Composition Simika% C 0.10-0.20% Si 0.10-0.35% Mn 0.35-1.50% S ≤0.05% P ≤0.05% Ireo singa firaka hafa Manampia Cr Mo Ni B Al Cu sns. Hardness HRC42-48 / 48-54 Mikraosialy Duplex rafitra co ...
Endri-javatra * Azo ampiasaina hanoloana fasika mineraly isan-karazany & abrasives tsy metaly, toy ny corundum, silikôida karbida, quartz tsy miangatra, vakana fitaratra, sns. * Famoahana vovoka ambany, fanatsarana ny tontolon'ny asa, tontolo iainana. * Afaka manolo ny ampahany amin'ny fizotran'ny pickling. * Famoahana vovoka ambany sy tontolo iainana miasa tsara, mampihena ny fitsaboana ny fako pickling. * Vidiny feno feno, ny androm-piainan'ny serivisy dia 30-100 heny noho ny abrasive tsy metaly toy ny corundum. * Afaka B ...
Ny fitifirana vy tsy misy vy dia be mpampiasa amin'ny fitifirana / fanapoahana rivotra isan-karazany amin'ny fanariana vy tsy ferrous, vokatra vita amin'ny vy tsy misy fangarony, kojakoja vita amin'ny aliminioma, fitaovana enti-miasa, vato voajanahary, sns. , matt fi fanatontosana ny fitsaboana et effet ect. Miaraka amin'ny kalitao tsara vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny tifitra vy tsy misy fangarony dia asongadin'ny poti sy fanamafisana, izay manome antoka ny fiainany maharitra sy ny fipoahana tsara. Ny pe ...
Nanao fanatsarana lehibe tamin'ny fitaovana sy ny teknika izahay tamin'ny alàlan'ny dingan'ny famokarana nentim-paharazana. Fampiasana tariby vy misy alim-borona avo lenta ho toy ny substrate izay mampiakatra avo kokoa ny fananana mekanika ary mampiorina azy io. Fanatsarana ny asa-tànana misy tariby izay mahatonga ny fandaminana anatiny ho matevina kokoa. Fanatsarana ny fizotran'ny passivation nentim-paharazana izay miankina tanteraka amin'ny fiatraikany hampihena ny fahasimbana mandritra ny fipoahana, manatsara ny fiainam-panompoana. Item index Index Chemi ...
Ny tombony amin'ny milina fipoahana amponga amponga azo antoka Azo antoka ny teknolojia fanapoahana: ny milina fipoahana amponga amponga dia amboarina amina karazana, karazany ary habe samihafa. Kambana izy ireo ary dian-tongotra kely dia kely fotsiny. Ny throughput mitohy dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo masinina maro. Layout friendly-maintenance: Ny fikojakojana tsy tapaka dia zava-dehibe amin'ny fitehirizana ny lanjan'ireo fitaovana maharitra. Ny varavarana lehibe sy serivisy fanaraha-maso dia manome fidirana mora amin'ireo singa manan-danja rehetra. Vokatr'izany...
Ny fitaovantsika firavaka mafy indrindra dia vokarin'ny brazing. Amin'ny toe-javatra sasany, ny sosona diamondra dia miraikitra mafy amin'ny vongan-tsolika aorian'ny fizotry ny vy. Ity karazana vokatra ity dia manana ny mampiavaka ny fahombiazan'ny fitotoana ambony, androm-piainana lava, fiarovana, fiarovana ny tontolo iainana ary tsy misy fandotoana. Ampiasao indrindra ny fitaovana fanapahana corundum ankehitriny sy ny fitaovana fandefasana azy, ny fitaovana diamondra elektrôlika malemy sy matevina rehetra, ary ny diam-bery voahidy mafana ...
Sponge Media abrasive dia misy amin'ny karazany 20 mahery, mahatratra profil hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 100+ micron. Ny vovoka rehetra dia maina, vovoka ambany, fipoahana ambany. Ny andiany be mpampiasa indrindra dia ny andiany TAA-S miaraka amina oksida aluminium ary andiana TAA-G miaraka amina vy. Type Propiles Abrasive Media Agent Application TAA-S # 16 ± 100 micron Aluminium Oxyde # 16 Haingam-pandeha sy mahery setra amin'ny akanjo indostrialy henjana. TAA-S # 30 ± 75 micron Aluminium Oxyde # 30 Fanesorana ireo firakotra multilayer ary mombamomba ny 75 micron. TAA-S # 30 ± 50 micro ...
Raha ampitahaina amin'ny grit vy nentim-paharazana vita tamin'ny tifitra vy, ny fananana grit vy dia manana ireto manaraka ireto: Ny akora vy mitondra vy vita amin'ny vy dia vita amin'ny vy mitondra Chromium izay manana fahaizana manamafy tsara noho ny atin'ny Chromium avo. Teknolojia vy mitondra grit vita amin'ny vy dia vita amin'ny fanorotoroana ny vy mitondra vy sandoka mivantana izay afaka amin'ny lesoka. Akanjo ambany Ny fanjakana sandoka mitondra grit vy misy sisiny maranitra dia manana fananana mekanika avo kokoa noho ny grit vy mahazatra amin'ny ...
Fitaovam-by vy - fanoherana avo lenta, fiainana lava ary fahombiazana lafo vidy
Fitaovana vy no fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana fitaovana fanapahana, fitaovana fandrefesana, bobongolo ary fitaovana tsy mahazaka fitafiana. Ny vy vy dia manana hamafin'ny rivotra avo ary afaka mitazona ny hamafin'ny hafanana avo, ary koa ny fanoherana mitafy ambony sy ny hamafiny. ...
Ny fipoahana fitifirana dia dingana mahazatra amin'ny fitsaboana amin'ny vy. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fanariana, vy, workpiece struktural, faritra fanodinana vy sy indostria hafa. Miaraka amin'ny fanatsarana ny siansa sy ny teknolojia ary ny fampandrosoana mahery vaika ny famokarana, manana avo kokoa isika ...
Ny harafesina vy dia misy hatraiza hatraiza, amin'ny fotoana rehetra Mba hisorohana ny harafesin'ny vy, ny fomba mahazatra indrindra dia ny fampiasana palitao hiarovana ny ambonin'ny vokatra vy. Ny tany dia tsy maintsy diovina alohan'ny fiarovana. Vokatra sy indostrialy an-jatony ao anatin'izany ny sambo, tanky fitehirizana, tetezana, vy ...
Fiantraikany lafo vidy fitifirana fitaovana fanapoahana masinina, fijanonana iray
Manoloana ny toe-java-tsena mihombo hatrany amin'ny indostria isan-karazany dia nametraka fanamby avo lenta kokoa amin'ny vidin'ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra ny orinasa. Ny fizotry ny fipoahana fitifirana amin'ny fizotry ny famokarana dia rohy manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny vidin'ny vokatra ...
A: Fitaovana fanapahana kapila: ny kapila fanapahana dia azo zaraina ho karazany roa: kapila fanapahana kapila sy kapila fanapahana diamondra. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fanapahana vokatra vy mahazatra, vy tsy vita amin'ny vy & fitaovana tsy vy. Ankoatr'izay, noho ny tontolon'ny asa ...